ABAPHINDEZELI BEMARVEL 'HOT TO TROT' EYONA NTO IBALASELEYO KWI-ANT-MAN KUNYE NE-IRON MAN BREW GAMEPLAY - IMIDLALO
Ukulinda umdlalo we-superhero ekulindeleke kakhulu sele uphelile. Njengalo lonke ixesha lomdlalo osekwe kubalandeli, iMarvel's Avengers inento
Ukulinda okona kulindelwe kakhulu umdlalo weqhawe phantse iphelile. Njengalo lonke ixesha lomdlalo osekwe kubalandeli, iMarvel's Avengers inento entsha epokothweni. Ukuhamba komhla kunciphisa ubude bomhla wokukhutshwa.
Ngoku inyukile ngokudityaniswa kwe-Iron-man kunye ne-Ant-man. Nangona kunjalo, abalandeli kunye nabadlala umdlalo kufuneka balinde kancinci ukuze babone indibaniselwano eyothusayo yamaqhawe.
Ngaphandle koko, kwinyanga ephelileyo kudliwanondlebe, kwathiwa yintloko yesitudiyo sikaScot Amos umdlalo ozayo yindibaniselwano entle yetekhnoloji ye-Iron Man kunye nePym Particles yeAnt-Man.
Nanku uMhla wokuKhutshwa ngokuchanekileyo kunye namaQonga axhaswayo:
Ngomhla we-4 kuSep 2020, i Ukudlala umdlalo weAvengers weMarvel iya kuphehlelela iPS4, iPC, iXbox 1, kunye noGoogle Stadia ngokunjalo. Umdlalo uphuhliswa kwaye upapashwe yiCrystal Dynamics kunye ne-Square Enix, ngokwahlukeneyo.
Ingxelo ka-Amos ye-combo efanelekileyo:
U-Amosi wathi xa sele efumene umbono wokusebenzisa ii-Iron Man's gear ukuba ne-spritz ye-Ant-Man Pym oscillators. Uye wachaza ukuba ukuba umdlali usebenzisa inqwelomoya ngenqwelomoya kunye nokuphuma kwelaser ngaphandle. Ekugqibeleni, inokunceda ekujoliseni uninzi lweentshaba. Nangona kunjalo, eyona nto ibalulekileyo kukuba zibandakanyiwe neePym Particles.
Uye waqhubela phambili esithi uhamba ngenqindi yomlo we combo. Ngaphandle koko, izinto zilungile kwaye zitshintshiwe ngasekhohlo. Emva koko, ii-mechs ezinkulu zishwabana zibe ziithoyi ezincinci. Wayelandelwa liqela leHulk kunye ne-AI elihlangeneyo elonakalisa ubugqwetha phakathi kwabo bonke. Emva koko uTro ubonakalisa ukukhanya kwakhe. Indibaniselwano xa zizonke iyonwabisa kwaye izaliswe yimincili.
Inkcazo yeMarvel's Avengers:
Abaphindezeli beMarvel ngumdlalo ophuculweyo ophuculweyo yiCrystal Dynamic kwaye uveliswe yi-Square Enix. Isekwe kwibali lokwenyani elinamaqhawe afanayo. Ukudlala le kunokubangela umdla kunye nokusebenzisana namava okudlala kunye nemizobo efanelekileyo.
Kule nto, singadlala lo mdlalo ungaxhunyiwe kwi-intanethi njengomdlali omnye okanye kwi-intanethi ubuninzi njengeqela lamalungu ama-4. Umdlalo uya kuba neenketho zokwenza ngokwezifiso eziza kubandakanya iingubo kunye nezakhono, ezinokuhlaziywa ngumdlali. Uhlaziyo lomdlalo wasimahla luya kufumaneka kubadlali abanemimandla emitsha kunye nabalinganiswa. Ukuqhubekeka phambili kumdlalo womntu umntu angangaliqhawe kubuchule nakumandla, kwaye kufuneka akhusele umhlaba kwiingozi Umdlalo weMarvel's Avengers uya kufumaneka kwisikhululo sokudlala 4, Xbox enye, Stadia kunye neSteam.
manga njengomzingeli x umzingeli
ibonisa njengenkosi yamakhonkco
re: zero isiqendu 26